Magacyada saddex Jaamacadood oo Wasaarada Waxbarashadu kala noqotay aqoonsiyada iyo sababta keentay
Hargeysa(GNA) Wasiirka Wasaarada Waxbarashada somaliland Ibraahim Habane oo shir jaraa’id ku qabtay xafiiskiisa, ayaa sheegay inay ruqsadaha kala noqotay wasaaradiisu saddex jaamacaddood ka furnaa magaalooyinka Hargeysa iyo Burco, kaddib markii ay buuxin waayeen shuruudihii dowladdu ka rabtay, qaarkoodna ay magacyo jaamacaddo hore u jiray la baxeen.
Wasiirka ayaa sheegay in qiimeynta Jaamacadahan lagaga qaaday ruqsadaha ay u soo gudbiyeen Guddida Tacliinta sare ee dowladdu, markii ay dib u eegis ku sameeyeene ay ku qanceen wasaarad ahaan asbaabaha loo cuskaday qarraarka Guddida.
Go’aanka guddida tacliinta sare wuxuu saameeyey jaamacadda la yidhaahdo Togdheer International University, hore loo odhan jiray Addis ababa University, oo xarunteedu tahay magaalada Burco, Kuliyadda la yidhaahdo Horn international Collage iyo Machad Islamic ah oo isna dhawaan la furay, kaasoo magaciisa lagu sheegay Al Machad Caali Collage.
“dhamaan Jaamacaddahaasi waddanka kama fulin karaa howlo waxbarasho ilaa iyo intay dhamaystirayaan Shuruudaha iyo derejada loogu aqoonsan karo Jaamacaddo. Kuma koobna howshani saddex jaamacadood ee howsha lagu qiimeynayo tayada waxbarashada jaamacadduhu way sii socon doontaa, waanay wadaa guddida tacliinta sare iyo wasaaradduba”sidaas ayuu yidhi Wasiirka Waxbarashada iyo Tacliinta sare ee somaliland oo ay shirka jaraa’id ku wehelinayeen Wasiir ku-xigeenka iyo Agaasimaha Tacliinta Sare ee wasaaraddu.
Ma jiro wax war ah oo ka soo baxay maamuleyaasha Jaamacadaha ay dowladdu kala noqotay ruqsadaha.
Hase ahaatee talaabadan ayaa imanaysa xilli aad loo dhaliilayo tayada waxbarasho ee Jaamacadaha dalka ka furan oo qaar badan la saluugsanyahay tacliinta ay bixiyaan.
CABDILAAHI DHEERE JAAMACADDO RUQSADO Somaliland WASIIRKA WAXBARASHADA	2017-04-11
Previous: Xildhibaano badan Soomaali ah oo ku guulaystay Doorashada Golaha Deegaanka Finland
Next: Taageero Mowqifka Adag ee Boqor Badmadow